လျှပ်စစ်စကိတ်ပေါ်တွင် Braking အမျိုးအစားများ - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
မည်သည့်လျှပ်စစ်ကားများတွင် braking- ပြောင်းလဲနေသော, ပွတ်တိုက်မှု, ရုပ်ပျိုဘရိတ်အတော်ကြာမူလတန်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ထိုသူအပေါင်းတို့ယာဉ်နှေး၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ။
ပွတ်တိုက်အားဘရိတ်သမားရိုးကျကားများပေါ်တွင်အသုံးပြုဖြစ်ကြောင်းဘရိတ်၏တူညီသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အမှန်ကတော့တစ်ဘရိတ် disc ကိုဆန့်ကျင်ပွတ်တိုက်မှုယာဉ်ဆင်းနှေးကွေးသောအပူသို့ kinetic စွမ်းအင် (ယာဉ်များ၏လှုပ်ရှားမှုကို) အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုသည်။ တစ်ဦးကပုံမှန်လမ်းစက်ဘီးကိုလည်းဆိုင်ကယ်ရဲ့ဘီး၏အတွင်းစိတ်အနားကွပ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဘရိတ် pad ပါ clamping နေဖြင့်နှေးကွေးမှပွတ်တိုက်အားကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။
လျှပ်စစ်လက်ရှိ wire ကိုမှတဆင့်မောင်းနှင်သောအခါပေါ်မှာတွန်းတဲ့သံလိုက်စက်ကွင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်အောင် Outrunner brushless မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စက်ဝိုင်းထဲမှာကြေးနီဝါယာကြိုးဒဏ်ရာတစ်ခု core ကိုလှည့်ပတ်သံလိုက်အစုတခုလျှပ်စစ်-ဖြစ်ကြောင်းစကိတ်ပေါ်တွင်အသုံးပြုမော်တာ၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစား motors- ယင်းမော်တာလှည့်စေသံလိုက်၏အစုံ။ အဆိုပါ coiled ဝါယာကြိုးတစ်လျှပ်စစ်သံလိုက်ပါစေ။ သံလိုက် ပတ်သက်. အေးမြသောအရာဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်ကြေးနီဝါယာကြိုးတစ်ဝှမ်းသံလိုက်လက်စွပ်ကိုလှည့်ပါလျှင်ကဝါယာကြိုးထဲမှာလျှပ်စစ်လက်ရှိမိတ်ဆက် occur- နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည်ပြောင်းလဲနေသောရုပ်ပျိုနှစ်ဦးစလုံးဘရိတ်စနစ်များကိုနောက်ကွယ်မှအခြေခံကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ပြီး, ဘယ်လိုမီးစက်လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်ဖို့။
dynamic ဘရိတ်များသောအားဖြင့်မီးရထားစက်ခေါင်းကအသုံးပြုတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ထဲမှာ, kinetic စွမ်းအင်ထို့နောက်အပူအဖြစ်စွမ်းအင် dissipates သော resistor, စချည်ငင်မော်တာကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်အပူသို့ကူးပြောင်းသည်။ ယင်းမော်တာအတွက်သံလိုက်ကြေးနီဝါယာကြိုးတစ်ဦးကလက်ရှိသွေးဆောင်သောအခါ, ခုခံယင်းမော်တာချည်ငင်နှေးကွေးထုတ်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့အမျှရုပ်ပျိုဘရိတ်နှင့် တွဲဖက်. ပြောင်းလဲနေသောဘရိတ်ကိုအသုံးပြုတဦးတည်းလျှပ်စစ်စကိတ်စီးရှိပါတယ်။
လျှပ်စစ်စကိတ် အဓိကအား "ရုပ်ပျိုဘရိတ်" ဟုခေါ်သည့်စနစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုပါ။ ဒါကအစားအပူအဖြစ်စွမ်းအင်ငျ့သှားဖို့ resistor သို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြန်ညွှန်း၏, အဲဒါကိုပြန်အားသွင်း, ပြန်ဘက်ထရီသို့ redirected ရဲ့ မှလွဲ. ပြောင်းလဲနေသောဘရိတ်ဆင်တူသည်။
ရုပ်ပျိုစနစ်များနှင့်အတူမူလတန်းပြဿနာဘက်ထရီအပြည့်အဝအခါကဘက်ထရီရိုက်တဲ့ပြီးရင်နှင့်ဖျက်ဆီးမပါဘဲနောက်တဖန်လက်ရှိလကျမခံနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဘက်ထရီ 100% တာဝန်ခံတာမျိုးပြီးနောက်ထိုကြောင့်, သာရုပ်ပျိုဘရိတ်ကိုအသုံးပြုပျဉ်ပြားအမှန်တကယ်ဘရိတ်အားလုံးကိုနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်။
တူပျဉ်ပြား Koowheel ဘုတ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ်တိုးမြှင်ဘုတ်အဖွဲ့ဘရိတ်ထွက်ခုတ်ဖြတ်ရုံမရောက်မီမြည်အောင်သတိထားပါပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီမကြာခဏဘုတ်အဖွဲ့ကိုချွတ်ကယ်တင်ရန်အတွေ့အကြုံမြင်းစီးဖြစ်ပေါ်စေရန်လုံလောက်သည်မဟုတ်။ ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲသင့်ကိုမှာသင့်ရဲ့လျှပ်စစ်စကိတ်စီးစီးတိုင်းမြန်နှုန်းမှာဘရိတ်ခြေကိုဘယ်လိုသိရန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ mellow Drive ကိုအတူကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဘက်ထရီအပြည့်အဝ (နှင့်တဲ့အခါမှာအခြားဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဘရိတ်လုံးဝထွက်ခုတ်ဖြတ်မည်ဟု) ဖြစ်ပါသည်တစ်ကြိမ်ကရုပ်ပျိုနှင့်ပြောင်းလဲနေသောနှစ်ဦးစလုံး braking- အသုံးပြုဖြစ်ပါသည်, ကပြောင်းလဲနေသောဘရိတ်ကို switch နဲ့နေဆဲသင်သည်နှေးကွေးခွင့်ပြုပါတယ်။
အချိန် post: ဒီဇင်ဘာ-14-2017